ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝ… – PVTV Myanmar
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန၊ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာန နှင့် အမျိုးသမီး၊ လူငယ်နှင့် ကလေးသူငယ်ရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန တို့က ၂၀၂၁ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ဒုက္ခသည်များနေ့ အထိမ်းအမှတ် ပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်တစ်ရပ်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ သတင်း
“မြန်မာနိုင်ငံသို့ လက်နက်များ စီးဝင်နေမှုကို တားဆီးရေး (Prevent the flow of arms to Myanmar)” အပါအဝင် အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရပ်တွေအပေါ် ပြင်းထန်စွာ ရှုတ်ချတဲ့ အချက်တွေပါဝင်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ရပ်ကို ချမှတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ (၇၅) ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံရဲ့ (၈၃) ကြိမ်မြောက် မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးမှာ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်း ပြောကြားခဲ့တဲ့ မိန့်ခွန်းကောက်နှုတ်ချက်သတင်း
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ (၇၆) နှစ်မြောက် မွေးနေ့နဲ့ အဖမ်းဆီးခံပြည်သူများ လွတ်မြောက်ရေးဆုတောင်းပွဲ အခမ်းအနားကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် နိုင်ငံတကာ ကွန်ရက်က Onlineမှတဆင့် စီစဉ်ကျင်းပခဲ့တဲ့ သတင်း တို့ကို နားဆင်ကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Like – 5K Share – 274
2021-06-20 at 7:17 PM
2021-06-20 at 7:35 PM
U Kyaw Htoo says:
2021-06-20 at 7:36 PM
2021-06-20 at 8:52 PM
ကဗျာ စော ဝေ says:
2021-06-21 at 8:33 AM
Good new pvtv.
ဦး လြင္ says:
2021-06-21 at 12:33 PM
We are standing with you all.
La Mung Kasha says:
NUG CRPH အရေးတော်ပုံအမြန်ဆုံးအောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမည် တစ်နေ့မှမရပ် လူသေမှုကများများလာနေပြီ အမြန်ဆုံး အကောင်အထည်ဖော်ရမာ်DDay အမြန်ဆုံး သတ်မှတ်ပါ